‘जनप्रतिनिधिप्रति जनताको गुनासो मात्र छैन,विश्वास पनि छ’ - 761खबर.com
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै गरेको स्थानीय तह वर्गीकरणमा यो नगरपालिका कर्णालीकै एकमात्र सुगम स्थानीय तहमा पर्न सफल भएको छ । ०३३ सालमा नगर पञ्चायतका रुपमा स्थापना भएको वीरेन्द्रनगर पुरानो नगरपालिकामध्येको एक हो । भौगोलिक सुगमता हुँदाहुँदै पनि यहाँको विकासले फड्को मार्न नसकेको आम नगरबासीको बुझाइ छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएको २० महिना बितिसकेको छ । विकास निर्माणदेखि नगर सुधारका अन्य सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नसकेकोमा यहाँका जनप्रतिनिधिको आलोचना पनि उत्तिकै सुनिने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले वीरेन्द्रनगरको नेतृत्वले के गर्दैछ ?, यहाँ विकासले किन गति लिन सकेको छैन् ? हालसम्म नगरपालिकाले के–कस्ता प्रगति हासिल गरिरहेको छ ? भनेर उप–प्रमुख मोहनमाया ढकालसंग कुराकानी गरेका छौं ।
१. वीरेन्द्रनगरमा विकासको गति कहाँसम्म पुग्यो ? नगरपालिका अहिले के गर्दैछ ? हामी निर्वाचित भएको दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । पहिलो वर्ष छनौट गर्नैमा बित्यो । चुनावी वर्ष थियो । काम गर्ने कानुनी आधार थिएनन् । त्यसका बाबजुद पनि हामीले केही दीर्घकालिन र तत्काल गर्नुपर्ने योजनाहरु वर्गीकरण गर्न लाग्यौं । वीरेन्द्रनगरलाई प्रशासनिक, शैक्षिक र पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सार्‍यौं । नगरका सबै १६ वटै वडामा ५० लाख रुपैंयाका नगर गौरवका आयोजनाहरु छनौट गर्‍यौं । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासंग सम्बन्धित थुपै्र योजनाहरु अघि बढाएका छौं । प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा कांक्रेविहारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) हुँदैछ । सिमलचौक–एयरपोर्ट–जिप्रका हुँदै गणेशचौक जोड्ने सडकको स्तरोन्नति कार्य शुरु भइसकेको छ । नगर महत्वको योजना अन्तर्गत मंगलगढीदेखि कांक्रेविहारसम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गर्न डिपिआर बनाइसकेका छौं । नगरपालिका र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा मुख्य बजार क्षेत्रका सडकहरुको कालोपत्रे, स्तरोन्नति लगायतका काम शुरु गर्दैछौं । खुलामञ्चलाई खुलापार्कको रुपमा विकास गर्नका लागि टेण्डर प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । संघीय वन मन्त्रालयको सहयोगमा धुलियाबिट–बांगेसिमल मुख्य सडकमा ‘ग्रिनेरी प्लान’ अगाडि बढेको छ । अबको केही समयमै मुख्य हाइवे हरियाली देखिनेछ । सहिद पार्क, बुलबुले र देउती बज्यैको डिपिआर तयार हुँदैछ । थपिएका चार वटा वडाको पनि बृहत गुरुयोजनाको बनाउँदैछौं । संघीय सरकारको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम हाम्रो नगरपालिकामा पनि लागू भएको छ । वन, वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरु पनि यससंगै शुरु हुँदैछन् । सडक नपुगेका १५ र १६ वडालाई सडक सञ्जालमा जोड्दैछौं । यी वडामा चालू आवमै विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्य अनुसार काम भइरहेको छ । प्रत्येक वडा कार्यालयमार्फत सेवा–सुविधाहरु प्रदान गर्न थालिसकेका छौं । सहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेका छौं । सबै वडामा नगर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । साबिकको जिल्ला अस्पताललाई नगर अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै खानेपानीको दीर्घकालिन समाधानका लागि झुप्रा बृहतको स्तरोन्नतिका साथै भेरीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट उपत्यकामा ल्याउने प्रक्रिया शुरु भैसकेको छ । २. नगरबासीले खोजेको परिणाममुखी विकासको चाहना कहिले पुरा हुन्छ ? पहिलो वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम अलि हतारमा ल्यायौं । हतारमै नगर सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । चुनावी वर्ष पनि थियो । आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छँदै थियो । अघि नै भनिहालेँ हामीसंग ऐन–नियम केही थिएन । हामीले पाएका अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन । असारमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन आइसकेपछि बल्ल काम गर्ने आधार बन्यो । हाम्रो विकासको प्रक्रिया अलि लम्बेतान भएकाले केही ढिला हुन पुगेको छ । परिणाम देखिने बेला आउँदैछ, त्यो भएर पनि नगरवासी अहिले सन्तुष्ट हुन सक्नुभएको छैन् । जनताको चाहना राजधानी भइसकेपछि तीव्र विकास होस् भन्ने होला । तर, हाम्रो स्रोत साधनले मात्र सम्भव छैन् । बल्ल प्रदेश सरकारले पनि गतिशिल बन्दैछ । अहिलेसम्म प्रदेशलाई कर्मचारी, भौतिक संरचना र कानुन अभावले कतिपय काम गर्न समस्या थियो । अब त्यो अवस्था करिब–करिब हटेको छ । प्रदेश सरकारले पनि हामीसंग समन्वय गरेर यहाँ केही भौतिक पूर्वाधारका कामहरु अघि बढाउँदैछ । नगरवासीले देख्ने गरी यहाँको हटलाइन यसै वर्ष तयार हुन्छ । यसको ठेक्का भएर पनि काम सुरु भैसकेको छ । मंगलगढी–कांक्रेविहार पर्यटकीय मार्गको स्तरोन्नति पनि यसै वर्ष हुन्छ । सिटी बसर्पाक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । टेम्पो व्यवस्थापन गर्दैछौ । मुख्य बजारभित्रका सडक विस्तारका कामहरु पनि यसै वर्ष पुरा गर्छौं । त्यसपछि जनताको असन्तुष्टि पक्कै कम हुँदै जानेछ । ३. सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नगरले के–कस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ ? महिला, बालिबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौं । अहिलेपनि प्रदेश अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री वार्डको व्यवस्था गरेका छौं । त्यहाँ १० वार्ड ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुनिश्चित गरिएको छ । जतिबेला पनि ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल भर्ना हुुनुभयो भने पूर्वाधारदेखि औषधि उपचारको व्यवस्था गरेका छौं । ‘बा–आमा कुरा चौतारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । प्रमुख÷ उप–प्रमुख, वडाध्यक्षहरु चौतारीमै पुगेर वृद्धवृद्धासंग संवाद गर्ने समस्या बुझ्ने गर्दछौं । त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकका लागि न्यानो कपडा वितरण गर्ने प्राथमिक उपचारलगायतका सेवा प्रदान गर्दछौं । महिला र किशोरीमैत्री नगरपालिका बनाउने योजना अनुरुप कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले ‘छोरी जन्म बचत खाता’ कार्यक्रम ल्यायो । यस अन्तर्गत जन्मदर्ताका आधारमा एक हजार रुपैयाँको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरेका छौं । आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश अस्पतालमा गर्भवती जाँच गराउने महिलाको निशुल्क भिडियो एक्सरे गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यसका लागि १० लाख रुपैयाँको लैंगिक कोष खडा गरिएको छ । कुनै पनि महिला दिदीबहिनी हिंसा प्रभावित हुनुभयो भने उहाँहरुको उपचार नगरपालिकाले गर्छ । नजिकको बर्थिङ सेन्टर अथवा प्रदेश अस्पतालमा सुत्केरी हुन जाने महिलाहरुको एम्बुलेन्स भाडासमेत हामीले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हिंसाप्रभावित महिलाको लागि सुरक्षित भवन बन्दैछ । अहिले हामीले एउटा नारा तय गरेका छौं ‘एक घर एक महिला स्वरोजगार– वीरेन्द्रनगरको नगरपालिकाको विकास र सम्वृद्धिको मूल आधार’ कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । पहिलो वर्ष एक करोड छुट्यायौं र प्रत्येक वडामा कम्तीमा पाँच लाख रुपैया छुट्याउन लगाएका छौं । यसरी जम्मा भएको १ करोड ८० लाख रुपैयाँ महिलाहरुको आयआर्जनकै क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी निर्देशिका बनाइसकेका छौं । त्यस्तै, किशोरीलाई पहिलोपटक महिनावारी हुँदा कसरी सुरक्षित हुने र महिनावारी भनेको पाप होइन यो त आमा बन्ने अवसर हो, यसलाई उत्साहका साथ मनाउनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ, राम्ररी मनाउनुपर्छ भनेर नगर स्वास्थ्य शाखामार्फत यसलाई अलि बढी प्रचार–प्रसार गर्न थालेका छौं । बालविबाह मुक्त नगर पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ । प्रमुख÷उपप्रमुखसहित प्रत्येक विद्यालयमा गएर किशोर–किशोरीसंग संवाद गर्ने कार्यक्रम शुरु गरेका छौं । बालविवाहलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? यसमा वडा कार्यालयको भूमिका के हुने भनेर छिटै सम्भवतः माघको दोस्रो हप्तासम्म सबै वडाका अध्यक्ष, सचिवहरु, कार्यपालिकाको टिम बसेर एउटा बृहत योजना बनाई अघि बढ्ने तयारीमा छौं ।
अर्को चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबै वडामा सहरी स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरौं भन्ने उद्देश्यका साथ आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाएका छौं । स्वयंसेविकालाई थप प्रोत्साहनका लागि नगरपालिकाले मासिक एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, शिक्षाको क्षेत्रमा पनि प्रारम्भिक बाल विकास हाम्रो प्राथमिकतामा छ । बालबच्चालाई कक्षा ५ सम्म निजी स्कूल र त्यसमाथि सरकारीमा पढाउने प्रवृत्ति छ । अब हामीले सामुदायिक स्कूलमा आर्कषण बढाउने गरी प्रारम्भिक बाल विकासका सहयोगी शिक्षकहरुलाई डे«स भत्ताबापत एक हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएका छौं । ४.प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म जताततै कर्मचारी अभाव छ भनिन्छ, यहाँको नगरमा अवस्था के छ ? हाम्रो नगरपालिका अलि पुरानो र सुगम भएकाले यहाँ यो कर्मचारीलाई आउन त्यति समस्या छैन् । कर्मचारी व्यवस्थापनका हिसाबमा केही सफल भएका छौं । प्रदेश राजधानीको नगरपालिका भएकाले कर्मचारीलाई यहाँ बस्न, काम गर्न कुनै असहज हुने कुरा पनि भएन । यद्यपि, विगतको स्थानीय निकायकै कर्मचारीले त पर्याप्त छैन् । थुपै्र शाखाहरु थपिएका छन् । कार्यक्षेत्र बढेको छ । जस्तो, न्यायिक समिति छ, न्यायिक शाखा छ । त्यहाँ पनि कर्मचारी चाहिने अवस्था छ । ५. तपाइँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि हो, न्यायिक काम कारबाही कसरी सम्पादन गर्नुभएको छ ? वीरेन्द्रनगर अलि बढी विवाद आउने नगरपालिका हो । साबिकको क्षेत्रीय सदरमुकाम र अहिलेको प्रदेश राजधानी भएसंगै यहाँ जनघनत्व ह्वात्तै बढेको छ । सहरीकरण पनि तीव्र गतिले बढेको छ । त्यसले गर्दा पनि हिजोभन्दा आज समस्याहरु थपिँदैछन् । संविधान अनुसार न्यायिक समिति गठन गरेका छौं । त्यसको संयोजक उपप्रमुख हुनुका नाताले म स्वयं छु । वरिष्ठ अधिवक्ता हाम्रो कानुनी सल्लाहकार हुुनुहन्छ । अधिकृतसहित २ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ । न्यायिक शाखामा धेरै खाले समस्याहरु आउँछन् । चैत महिनायता ४८ वटा विवाद समाधान गरिसकेका छौं । न्यायिक समिति कार्यसम्पादन विधेयक पारित गरेर त्यसै अनुसार न्याय निरुपण गर्दै आएका छौं । सकेसम्म मेलमिलाप गराउने, मेलमिलाप गराउन नमिल्ने मुद्दाहरु प्रहरी र अदालतसमक्ष पठाउने गरेका छौं । ६.न्यायिक समितिको कामप्रति पीडितहरु कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? मलाई एउटा के कुरा खुसी लाग्छ भने हामीप्रति नागरिकको गुनासोमात्र छैन्, विश्वास पनि छ । जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास छ । यिनीहरुले पनि न्यायधिसको झैं ऐन,कानून, निर्देशिका हेरेर नै मुद्दाको छिनोफानो लगाउँछन् भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् । जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ । संविधानले दिएको अधिकार र हामीले बनाएको कार्यसम्पादन ऐनमा टेकेर काम गर्ने गरेका छौं । जस्तो, हामीकहाँ जग्गासम्बन्धी विवाद बढी आउँछन् । त्यसमा नक्सा शाखाको राय माग्छौं । कुनै विवाद भएर प्राविधिकलाई फिल्डमै पठाउँछौंं । अनि प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई ख्याल गरेर समाधान खोज्छौं । ७. कानुन निर्माणको अवस्था के छ ? हामीले हालसम्म करिब ३० वटा जति ऐन,कानून र निर्देशिकाहरु पारित गरिसकेका छौं । जुन आवश्यक छ, त्यो पहिले बनाउँछौं । शिक्षा, कृषि, सहकारीसम्बन्धी ऐन बनाइसकेका छौं । संघ र प्रदेशले नबनाएका कानून पनि हामीले बनायौं । पछि बाझिएको खण्डमा हाम्रा कानून स्वतः खारेज हुने नै छन् त्यसैले पनि शुरुमै काम गर्नलाई ऐन चाहिने भएकाले हामीले बनायौं । शिक्षा ऐन संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रहेर हामीले बनायौं, संघ र प्रदेशले बनाएको छैन् । अब काम गर्नलाई ऐन त चाहियो । पछि संघीय र प्रदेश ऐनसंग बाझिए खारेज गर्छौं । ८.अहिले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई छ, बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य मनपरी छ । अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ नि ? अनुगमन समितिको संयोजक पनि म आफै हो । हामीले बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएका छौं । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्देशिका ल्याएका हौं । अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं । औपचारिकतामात्र सीमित नराखेर अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक उपभोक्ताको हकहितलाई ध्यानमा राख्नेछौं । सबै प्रकारका पसलहरुको अनुगमन गर्छौं । गल्ती गरे चेतावनीदेखि जरिवानासम्म तिराउँछौं । प्रहरी, प्रशासन र मिडियाको सहयोग लिएर बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउँछौं । ९. प्रदेश राजधानीको नगरपालिका हुनुका नाताले प्रदेश सरकारसंग तपाईहरुको अपेक्षा के हो ? प्रदेश राजधानीको नगरपालिका र कर्णालीमै सबैभन्दा सुगमको नगरपालिका भएपनि हाम्रा दुई वडामा सडक र विद्युत पहुँच पुगेको छैन् । खानेपानीको समस्या उस्तै छ । विगतमा बनेका सडकहरुको पुनर्निमार्ण गर्नुपरेको छ । जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सेवा प्रवाह गर्न अवश्य पनि च्यालेन्ज छ । यहाँको भौतिक विकासका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारसंग निरन्तर संंवादमा छौं । यहाँको समस्या हाम्रो मात्र नभई सिंगो प्रदेशबासीको भएकाले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याईँ गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो जोड रहिआएको छ । प्रदेशबाट निर्वाचित सांसददेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुसमक्ष अनुरोध गर्दै आएका छौं । हाम्रो गुरुयोजना अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट परिचालन गर्न निरन्तर भन्दै आएका छौं । किनकी, यहाँको विकास अब नगरपालिकाको मात्र जिम्मेवारीमा छैन् । १०. प्रमुख र तपाइँ (उपप्रमुख) फरक–फरक पार्टीबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, फरक पार्टी हुँदा काम गर्न समस्या भोग्नुपरेको छ ? अहँ, त्यस्तो पटक्कै छैन् । हामीले निर्वाचित भएका दिनदेखि नगरपालिकाका जुनसुकै विषयमा पनि आपसी समझदारी अनुसारै निर्णय गर्ने गरेका छौं । प्रमुखको आफ्नो जिम्मेवारी छ, उपप्रमुख र कार्यपालिकाको आफ्नै जिम्मेवारी छ । सबैले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बुझेर काम गर्ने हो, गर्दै पनि आएका छौं । हामी फरक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेपनि अन्ततः दुवै पार्टीका घोषणापत्रको मूल मर्म वीरेन्द्रनगरको विकास र समृद्धि नै हो । यसलाई व्यवस्थित प्रशासनिक सहर बनाउने, पर्यटकीय र शैक्षिक पूर्वाधारको विकास गर्ने हो । यही गन्तव्यमा पुग्न हामीले सहकार्य गरेर अघि बढेका छौं । कुनै पनि काम गर्दा पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अपनाउँछौं । जसले गर्दा हामीमा कुनै अविश्वास र वैमनष्यता देखापरेको छैन् । धन्यवाद ।